Ebevava na Khandala njem | Nchịkọta Njem maka 3N / 4D
Njem gaa na Helavala - Khandala
Ụbọchị 03 / 04 Days
| 245 njegharị
[rev_slider alias = "Njem gaa na Helavala - Khandala"]
Mgbe ị bịarutere ọdụ ụgbọ elu / ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Mumbai, bulie ma nyefe ya na Lonavala. Mgbe ị bịarutere, banye na họtel. Anavala aghọwo onye a ma ama n'ihi onyinye okike dika ndagwurugwu, ugwu nta, mmiri mmiri na-egbuke egbuke, mmiri na-acha uhie uhie na ikuku oyi. Mpaghara a juputara na mma mara mma. Anavala bụ uri egwu nke Chineke kere. N'ụtụtụ ụtụtụ na-ebili n'elu ebe a dị ka a ga - asị na ọ bụ mmiri na - ekpuchi mmiri. Nnụnụ ndị na-egbu egbu na-eji nwayọọ kpọte onwe ha na ihe a nile na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ụtụtụ. Jiri oge ezumike mee ihe ma ọ bụ na ị nwere ike ịhọrọ ịchọta ahịa ndị ahịa ebe ị ga-eri nri dị ụtọ nke Anavala. N'abalị na-anọ na Lonavala.
Taa, ị ga-aga ileta Bhushi Dam, bụ ebe a kacha mara amara n'obodo ahụ dum. Ọ bụ ebe zuru okè maka picnickers. E nwere mmiri mmiri dị ịrịba ama, dị nso na mmiri mgbochi, bụkwa ebe a ma ama. Mgbe ahụ, gaa na Ryewood Park, nke dịkwa na ahịa nke Lavala ma chee nnukwu echiche. A na-eme ka osisi ndị ahụ mara mma, ị ga-ahụ osisi dịgasị iche iche na okooko osisi mara mma. Mgbe e mesịrị, gaa na Lake Tungarli, ọdọ mmiri nke dị na Lonavala na isi iyi mmiri na obodo Sivala. Oge fọdụrụ nọ na ntụrụndụ na mgbe emesịrị ị lara ezumike nká maka abalị na Lonavala.
Nri ụtụtụ na nkwari akụ. Mgbe nri ụtụtụ gara Khandala (15 kms / 30 nkeji). Site n'iji ebe nlegharị anya dị ka: Karla Caves, Visapur Fort, Walwan Dam. Gaa na Khandala ma nwee obi ụtọ site na ebe ndị ahụ dị egwu na ihu igwe. Ịlaghachi na nkwari akụ maka ịnọ abalị na Lonavala.
LONAVALA- MUMBAI (NGWA)
Zipu nri ụtụtụ, lelee ụlọ nkwari akụ ahụ. Na-aga Mumbai ka ị laghachi n'ụlọ site na ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ elu.